"1 Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, ny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, 2 mba tsy halaky hohetsiketsehina amin’ny saina na hampitahorina hianareo, na amin’ny fanahy, na amin’ny teny, na amin’ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron’ny Tompo. 3 Aza mety hofitahin’olona akory hianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin’ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, 4 ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin’ny tempolin’Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. 5 Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho, dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? 6 Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana, mba hampisehoana azy amin’ny fotoan’androny. 7 Fa miasa sahady ny zava-miafina, dia ny tsi-fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany. 8 Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna, izay holevonin’i Jesosy Tompo amin’ny fofonain’ny vavany ary hofoanany amin’ny fisehoan’ny fihaviany; 9 ny fihavin’ ilehiny dia araka ny fiàsan’i Satana amin’ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra 10 ary ny famitahana momba ny tsi-fahamarinana amin’izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. 11 Koa izany no ampanateran’Andriamanitra fiàsan’ny fahadisoan-kevitra aminy hinoany ny lainga, 12 mba hohelohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina, fa nankasitraka ny tsy marina." 2Tesalonianina 2:1-12
Inona no fampianaran-diso nandeha tao Tesalonika? (2b) Inona no dikan’ny hoe andron’ny Tompo eto? Nisy ireo nilaza fa efa tonga, efa niverina Jesoa. Nahatonga fahaverezan-kevitra sy fanontaniana betsaka tao amin’ny mpino izany. Ampahafantarin’i Paoly mazava indray ny zavatra samihafa hitranga, raha ny marina dia mampahatsiahy izy satria zavatra efa nambarany ihany izany hoy izy (5).
Lehilahin’ota. Io ilay antikristy noresahin’i Jaona mpaminany ihany koa. Handalo olana goavana izao tontolo izao dia hiseho io olona io hitondra ny vahaolana amin’izany. Toa hahomby tokoa izy (9-10) dia hasohasoana sy hindraindran’ny olona ka izay no hahatonga azy hanandra-tena ho Andriamanitra.
Ilay misakana (6). Nahoana no mbola tsy miseho izy io? Araka ny filazan’ny mpandinika, ny mbola maha-eto ny mpino, izay manana ny Fanahy masina dia misakana ny faharatsiana tsy hiseho amin’ny tena endriny, na dia efa hitahita soritra ihany aza ireo karazam-pahoriana vokatry ny habibian’ny olona sasany. Rehefa hakarina ho any amin’ny Tompo ny mpino izay vao hiseho io lehilahin’ota io.
Fiafaran’ny fanjakany. Hiverina indray Jesoa sy ireo mino nakarina. Amin’izay fotoana izay no ho tanteraka izay lazain’i Paoly eo amin’ny andininy faha-8.
Hisy fitsarana (12). Aorian’izay no hanamelohana ireo rehetra tsy nino ny marina dia ny famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy fa nanaiky kosa ny famitahana nafafin’ny devoly tamin’ny fomba maro samihafa teto amin’izao tontolo izao.
Soratra Masina ho an’ny herinandro: 2 Tesalonianina 3:5